Home » Freebies » Zọpụta ego mgbe ị na-ere ahịa Online Plus Gaa Nweta $ 10 na Swagbucks Browser Extension
Ọ bụrụ na ị na-ere ahịa na kọmputa na kọmputa desktọọpụ, anyị nwere onyinye dị egwu maka gị! Ọ bụ swagbucks nchọgharị ndọtị ị nwere ike ibudata maka Google Chrome ma ọ bụ Internet Explorer.
Site na ndọtị nchọgharị Swagbucks, ị nwere ike ịchekwa ego na ngwaahịa nkwalite ngwaahịa na ihe ọ bụla ịzụrụ na ụlọ ahịa gị kachasị amasị gị dị ka Amazon, eBay, Walmart, Target, wdg. Ị ga-enweta ego azụ na ụlọ ahịa echekwara, ego efu 10 n'efu na ha mgbe ị debanyere aha. Akụkụ kachasị mma banyere ntinye ihe nchọgharị Swagbucks bụ na ọ bụ 100% FREE ibudata ya mere jide n'aka na nata ya taa iji zọpụta ego ma nweta ego azụ!
Ozugbo ị debanyere aha maka Swagbucks, onye otu a ga - "Tinye ọrụ" na Bonus na ngalaba Swag Ups nke akaụntụ gị. A na-akwụ ụgwọ ego bara uru n'ụdị isi, nke a na-akpọ SB. Nweta bonus 1000 SB, nke yiri $ 10 bara uru, mgbe ị na-etinye ihe dịka $ 25 n'ụlọ ahịa dị na Swagbucks.com/Shop. Ị ga-enweta nke kacha nta nke 25 SB maka ịzụta a, nke ị ga-emerịrị n'ime ụbọchị 30 nke ndebanye aha. MyGiftCardsPlus.com na ịzụta njem agaghị eru.